လွှတ်တော်များ နှင့် အကျပ်အတည်း - စိန်ခေါ်မှုများ နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု
လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဖတ်စာအုပ်- ၁
လွှတ်တော်များ နှင့် အကျပ်အတည်း - စိန်ခေါ်မှုများ နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည်ဥရောပသမဂ္ဂက ငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီး International IDEA မှ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည် INTER PARES ကထုတ်ဝေသည့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဖတ်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ် ရောဂါ နှင့် ဆက်စပ်ရေးထားသည့် ဤဖတ်စာအုပ်တွင် ကပ်ကာလအတွင်း မှန်ကန်သည့်ဆုံး ဖြတ်ချက်များချရန် နှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရေးလွှတ်တော်များ၏ အရေးကြီး သည့် အခန်းကဏ္ဍကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါသည် နိုင်ငံများ၏ အုပ်ချုပ် မှုပုံစံများ အပေါ် ကြီးကြီးမားမား သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို အကောင်း ဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်စေသည့် အချက်များဖြစ်သည့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ နိုင်ငံ သားများ၏ဆန္ဒကို အလေးထားမှု၊ မူဝါဒများကိုထိရောက်စွာပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်မှုတို့ကို မထိခိုက် စေဘဲ အချိန်အကန့်အသတ်ကြားမှ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများက ကြိုးပမ်းလာရပါ သည် မူဝါဒများချမှတ်ရာတွင် ပြည်သူများကိုကိုယ်စားပြုခြင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအုပ်ချုပ်မည့်ဥပဒေ များချမှတ်ခြင်း၊ ဥပဒေအရဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကို အစိုးရကထိရောက်စွာနှင့် မျှတမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်ရေးကြီးကြပ်ခြင်း၊ ပြည်သူများထံမှရရှိသည့် အခွန်ငွေများကိုအစိုးရ၏ လုပ်ငန်းများ အ တွက်ခွဲဝေချထားပေးခြင်းနှင့် ပြည်သူများ၏ အမြင်များကိုအဆင့်တိုင်းတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း တို့အတွက် လွှတ်တော်များသည်အခရာကျသည့် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ကပ် ကာလအတွင်း လွှတ်တော် များသည် အကျပ်အတည်းများကြားမှ ၎င်းတို့၏တာဝန်များကို ထမ်း ဆောင်ရပါသည်။ ဤဖတ်စာအုပ်တွင် လွှတ်တော်များ၏တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများအနက်မှ ၂ ချက်ကို ဦးစားပေးထားပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် ပြည်သူအားလုံး၏ လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်း စားထားသည့် အရေးပေါ်ကာလဆောင်ရွက်ချက်များကို ချမှတ်ရေး၊ ကပ်ဘေးကာလအတွင်းအစိုးရ များ၏ အထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကို ကန့်သတ်ရေး၊ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိသာ အ သက်ဝင်စေရေး နှင့် လွှတ်တော်ကကြီးကြပ်နိုင်ရေးတို့တွင် လွှတ်တော်များကမည်သို့ဆောင်ရွက် သည်ကို တင်ပြထားပါသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် လွှတ်တော်များ၏လုပ်ငန်းများကိုအဝေးမှ နေ၍ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မည်ကဲ့သို့ ကြံဆဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ နိဂုံး အဖြစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါအပေါ် အစိုးရများအနေဖြင့်မည်သည့်ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာ အထိတုံ့ပြန်ခဲ့သည်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးနှင့် ကပ်ဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် နိုင်ရန် သင်ခန်းစာ များရယူနိုင်ရေးတို့တွင် လွှတ်တော်များက မည်ကဲ့သို့အရေးပါသည့်နေရာမှပါ ဝင်နိုင်သည်ကိုဆွေးနွေးထားပါသည်။
2. ဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် ရင်ဆိုင်ခြင်း - သူရဲကောင်းဆန်တဲ့အာဏာရှင် စနစ်လား ၊ စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလား?
3. လွှတ်တော်များ နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ
4. လွှတ်တော်များမှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို မည်သို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့ကြသလဲ - နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လွှမ်းခြုံသုံးသပ်ချက်
5. ဤကပ်ရောဂါကာလအတွင်း နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုရေးရာ၌ လွှတ်တော်များသည် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတွင် မည်သို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သလဲ
6. အထူးအခွင့်အာဏာများအား ဂရုတစိုက် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း၊ ပြဌာန်းခြင်း နှင့် ကန့်သတ်ခြင်း
7. ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် တီထွင်ကြံဆမှုများ
8. ပုံရိပ်ယောင်နည်းပညာဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းအား ခွင့်ပြုခြင်း - တရားဥပဒေနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
9. အကျပ်အတည်းအတွင်း လုပ်ငန်းများလည်ပတ်ခြင်း - လွှတ်တော်များအတွက် ဖြစ်ရပ်သစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ
10. အတိတ်ကအကျပ်အတည်းများထံမှ သင်ခန်းစာယူခြင်း - လွှတ်တော်များ၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ
11. လွှတ်တော်များနှင့် ဘေးအန္တရာယ်စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်း
12. ကြိုတင်မမှန်းဆနိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ - ကိစ္စရပ်တစ်ခုလုံးအား သုံးသပ်ခြင်း